Waftigii Baaxada Waynaa ee socdaalka dheer ku soo maray oo Jigjiga a Dib u Caraabay Magaalada Dire-Dawa - Cakaara News
Iyadoo ay waayadan danbe ku soo qulqulayaan Deegaanka Soomaalida Itoobiya Wufuud heerar kala duduwan leh oo ka socda DFI, 9ka-Deegaan,2da-Ismaamul,Saxaafadaha-Dalka,Qorayaasha,Taariikhyahanka,Hobolada-Caanka ah,Ganacsatada ugu waawayn DFI,Qaybaha Odoyaasha Dhaqanka iyo farshaxaniistayaasha Dalka uguna danbeeyeen waftigan Balaadhan ee ay Hogaaminayeen raysal-wasaare kuxigeenka DFI,Afhayeenka Golaha Federatinka oo ay wahelinayeen Wasiiro Heer Federaal ah madaxweynayaasha 9ka deegaan,Fanaaniinta Caanka ah,ganacsatada ugu waawayn Dalka iyo Abwaanada dalka.
Waftigan oo ay Bar-bilow ujeedada socdaalkoodan u ahayd Gobolka Shabeele Gaar ahaan Degmada Godey ayaa Booqashooyin Dhanka Maalgashiga iyo ka faaiidaysiga Dhulka dihin ka dib ka soo baqoolay Godey kuna soo hoyday Magaalada Jigjiga iyagoona Shir balaadhan ku yeeshay Guriga Martida magaalaa Jigjiga.
waxaa furitaankiisii khudbad dheer oo dhinacya badan taabanaysa ka soo jeediyay madaxwaynaha ddsi mudane cabdi maxamuud cumar wuxuuna si qoto-dheer waftigan uga warbixiyay heerka waxqabadka Xukuumada oo kaashanaysa Shacabkeeda,marxaladihii kala duduwanaa ee uu Deegaanku soo maray Dhanka Siyaasada,hagardaamadii Nabad-diidka, Nolosha shacabka,Dhaqaalaha,Horumarka iyo Maamulka suuban.
Madaxweynaha DDSI ayaa Bayaamiyay n heerka maanta ay xukuumada DDSI ka gaadhay isbedelada Horumarineed,N/galyo iyo maamulka saxarka Tiranba ay sabab u ahaayeen iskaashiga Xukuumada iyo Shacabwenaha DDSI qaybihiisa kala duduwan oo gacmaha ishaysta,sidoo kalana Tibaaxay baaxada Dhulka Soomaalida,ilaha Dhaqaal iyo khayraadka dihin ee alle ku manaystay DDSI oo aynan hore ugaga faaiidaynin Shacabka xukuumadihii hore ee adhiidka ahaa.
waftigan ayaa waxay booqashooyinku soo mareen mashaariicaha waawayn ee loogu tala galay xuska munaasabada oo dhamaantood la soo gaba gabeeyay waxaana ka mid ahaa meelaha ay booqdeen aqalada laba-daryaalaha ah ee laga dhex dhisay xarunta madaxtooyada looguna magac daray KALI, guryaha martida ee laga dhex dhisay machadka maaraynta iyo waliba cispitaalka way ee laga dhisay garoonkii hore ee diyaaradaha.
Waftigan oo qado-sharaf loogusameeyay Jigjiga ka dib u caraabay Dhanka ismaamulka Dire-dawa ayaa xalay ku hoyday halkaasoo si wayn loogu soo dhaweeyay.